राती सुत्नुअघि यि काम अनिवार्य गर्नुस्, घरमा धनको कहिल्यै कमि हुदैँन ! पूरा पढ्नु होस ।। – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/राती सुत्नुअघि यि काम अनिवार्य गर्नुस्, घरमा धनको कहिल्यै कमि हुदैँन ! पूरा पढ्नु होस ।।
पाकिस्तानीले फ’सायो नेपालि चेली लाई चेली रु’दै रु’दै..(भिडियो हेर्नुहोस)
कुवेतमा ड्युटी सकेर आवासमा फर्किने क्रममा सडक दुर्घटनामा परि एक नेपाली युवकको मृत्यु